Saron-tava vovoka China FFP2 miaraka amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy CE ISO FDA | Orient
Sosona dimy (avy ao anaty ka hatrany ivelany): landy totohondry vita amin'ny landihazo-Lamba-tsofina-fanjaitra vita amin'ny fanjaitra.
Anaran'ny vokatra Sarontava vovoka FFP2
Material: lamba tsy voatenona / Lamba voapoizina / clip orona / fehikibo saron-tava
asa: ampiasain'ny mpitsabo sy mpitsabo nify matihanina amin'ny tontolo misy risika
FANOMEZANA T / T
Sarona masaron-tava FFP2 dimy:
1. sosona dimy (avy any anaty ka hatrany ivelany): landy tototry ny landihazo-Lamba-tsofina vita amin'ny fanjaitra-landihazo totohondry
2. Ny fahombiazan'ny sivana saron-tava FFP2 ≥95%, tsara kokoa noho ny andiany Standard NIOSH ≥94%
Inona ireo sarontava FFP2?
FFP2 dia midika hoe ny Filter ≥Bakteria / sombiny mampidi-doza 94%.
1. sehatry ny indostria:
Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny fikarakarana sakafo, fanodinana bosoa,
zavamaniry simenitra, fanodinana vato sns.
2. fiainana andavanandro:
Izy ireo dia azo ampiasaina rehefa manao tetikasa Do-It-Yourself ianao, manao ny raharaha maloto, mamono otrikaretina ny tranonao ary miaro tena amin'ny PM2.5.
a. Raha manana stock ny saron-tava FFP2 dia 1-2 andro ny fandefasana azy;
b. Raha mamoaka sarontava vaovao FFP2 vaovao dia 20 andro ny fiterahana.
FAQ an'ny saron-tava vovoka FFP2:
F: Ahoana ny fomba haingana hanaovana ny filaminana?
A: Lazao aminay ny mailaka (ID, orinasa, fampahalalana), ary ny findainao NO.
A: ORIENTMED dia mpamokatra + varotra manokana amin'ny famokarana fitaovam-piarovana azo ampiasaina amin'ny fitsaboana sy manokana. Zonay koa ny manondrana.
F: Ahoana no fomba ahazoako ny vidin'ny vokatra tadiaviko?
A: Ny vidinay dia mifototra amin'ny entana entana, fitaovana, habetsahana, habe, fonosana ary ny varotra. Fanontaniana fotsiny alohan'ny hanafarana anao.
F: Ahoana ny amin'ny ora fandefasana?
A: Raha manana tahiry izahay dia halefanay ao anatin'ny roa andro aorian'ny nahazoanay ny fandoavanao sy ny entanao. Ny fotoana fandefasana dia miankina amin'ny habetsahan'ny filaminana sy ny fahaizan'ny famokarana.
F: Ahoana ny fandefasana ny entana amiko?
A: Ho an'ny santionany sy vokatra bitika kely, ny entana dia halefan'ny DHL, UPS, FedEx ary TNT. Ho an'ny famokarana betsaka dia azo alefa amin'ny alàlan'ny fitaterana an'habakabaka sy sambo.
Previous: Akanjo fitokana-monina PE azo atokana
Manaraka: Kitapo santionany Virosy ORIENTMED